ikhaya » Okufumaneka » Ukukhangela i-Shot Perfect? Iqala ngeNkxaso.
Ukukhangela i-Shot Perfect? Iqala ngeNkxaso.
Ngu-Elisabetta Cartoni, uMongameli kunye ne-CEO, IKARTONI (SpA)
Intsapho yam ilungiselele kwaye ivelise iinkqubo zenkxaso yekhamera ngaphezu kwe-80 iminyaka. Utata wam uRenato waza kamva utata, uGuguo Cartoni, wakha iintloko zekhamera ze-gyro kwi-40s.
Emva koko, iikhamera eziqhelekileyo zeBell & Howell kunye neMitchell zazizinzima kwaye zinzima. Ukuxhaswa kwakukho iintloko zamagosa ngaphezulu kweentsika okanye iidola. Iikhamera zitshintshile kakhulu ukususela ngoko. Uninzi luncinci kwaye kulula ukuyisebenzisa. Iinkqubo zenkxaso ziye zadalwa ngokufanayo. Bona, nabo banokukhanya kwaye kulula ukulawula. Sekunjalo, inqununu yesiseko emva kwenkxaso yekhamera ayiguquki. Inkqubo enika inkxaso inkxaso inikeza iqonga elizinzile lekhamera. Ikwabonelela ngokukhawuleza kunye nokuphindaphinda, ukudonsa ngokugqithiseleyo ukuze umqhubi angakwazi ukulawula ikhamera ngokulula nangokuzithemba.
Into enye eyatshintshile kakhulu ngababasebenzisi. Kwiintsuku zeentloko zekhamera, abadlali bee-cinematographer kunye nabaqhubi bekhamera beliqela elincinci, eliqinileyo. Bayazi ubugcisa babo ngaphakathi ngaphakathi njengokuba abaninzi bevukile kwiinkqubo zokufunda. Iikhamera zazibiza kakhulu kwaye zinzima ukusebenza. Kwakudingeka ukwazi zonke iinkcukacha ukuba uya kuphumelela kwi-film set. Emuva kwangoko, akukho ntloko zethu okanye i-tripods eza neencwadi zokufundisa. Akukho nto esinokuyichazela abathengi bethu ukuba babengayazi.
Idijithali yobudala ishintshile oko. Iikhamera zanamhlanje zikhulu, zincinci, zilula ukusebenza kwaye zingabizi ngaphaya kweekhamera zangaphambili. Ngenxa yoko, baye bandisa inkalo yezobugcisa. Abantu, abo bebengeke baphuphe ukuba neyabo 35mm Ikhamera, ngoku ingaba ne-DSLR ezininzi. Olu luphuhliso olwamkelekileyo njengoko luye lwabenza abaninzi abantu abatsha ukuba babe ngabaqhubi kunye nabamabonakalisi. Ixhobisa iindlela zokudala zobugcisa. Kodwa kuthetha ukuba abantu abaninzi abasebenza kunye neekhamera namhlanje abazange bafumane inzuzo yokuza kwindlela yokuqeqesha. Ngenxa yoko, zonke iinkqubo zethu zenkxaso kunye nezixhobo ngoku ziza neencwadi zokufundisa kunye nenxalenye yomsebenzi wethu ukufundisa abanye abasebenzisi ngezibonelelo kunye nokusetyenziswa kakuhle kwemveliso yethu.
Iikhamera zedijithali ezintsha zibonakala zonke iinyanga ezintandathu kwaye ezininzi zeekhamera ziinkalo eziyinkimbinkimbi zobugcisa obuhlukeneyo. Abaqhubi bahlala bechitha ixesha elininzi kunye nomgudu ukuze baqonde ubunzima bezixhobo ezintsha, ngoko ndihlala ndimangaliswa xa bechitha ixesha elide lokufunda malunga nezinto ezihamba phantsi kweekhamera zabo.
Inkqubo yokuxhasa impawu ibalulekile ekubambeni izibhengezo ezicocekileyo, ezibukhali, ezipholileyo. Ifuna imilenze egxininiswe ngokunyanzeliswa okukhulu kokususa ukunyuswa okungafunekiyo. Kwakhona kufuneka unikezele ngokulinganayo kunye nomlinganiselo ofanelekileyo wokudonsa ukuqinisekisa ukunyakaza okuthe ngqo, okungaphethekanga kunye nokulawulwa kakuhle. Kwinkqubo efanelekileyo yokuxhasa, kukho ukulungelelanisa ngokufanelekileyo phakathi kwepani kunye nokutshintsha. Enye yeemvavanyo esizenzayo kwiintloko ezintsha zamanzi zidutshulwa. Ukuba intloko ekhulayo ingahambisa ikhamera ngaphaya komgca wokudibanisa ngaphandle kokugubha, ithetha ukuba iiyunithi ezimbini zamanzi zisebenza ngokuvumelanisa.
Umngeni wabavelisi bokugqibela ukuyila iinkqubo zenkxaso ezinikela ukuzinza kobuchule, ukulinganisa kunye nokudonsa ngexabiso elithengiweyo. Akulula. Ukuba ukhiqiza ii-smartphones, unako ukubonelela abathengi bakho ngeteknoloji enobunzima kwixabiso elincinci kuba likwazi ukuvelisa ubuninzi. Kodwa iinkqubo zenkxaso yeekhamera zengcali zixhobo ezicwangcisiweyo kwaye aziboleki kwimveliso emininzi.
Intloko yesimanzi yesimitha yinto echanekileyo efuna ukulawula okuphezulu, ukuvavanya nokugqiba. Ukuveliswa kweMisa kuya kunciphisa ubugcisa kunye nokuzinza. Abaqhubi bekhamera bayazama ukubetha "iplani epheleleyo." Ukukwazi kwabo ukwenza oko kuxhomekeke, okokuqala, kwi talente. Kodwa i gear nayo ibalulekile. Ukuba ufuna ukufumana ipempe engcono kakhulu, udinga ikhamera enhle kunye ne-lens enkulu. Baza kukunceda uthathe umfanekiso oqingqiweyo. Kodwa ke kukho ukunyakaza kwaye kuvela kwinkqubo yenkxaso. Unokwakha idilesi enhle kwaye ube nekhamera enkulu yedijithali, kodwa ukuba inkqubo yakho yokuncedisa ihluleka, awuyi kufumana umphumo osemva kwakho. Ngoko, ukuba ufuna ngokwenene uphendu olupheleleyo, kufuneka ukhethe izixhobo zakho-zonke izixhobo zakho-ngokuhlakanipha.
U-Elisabetta Cartoni ungumongameli kunye ne-CEO yeCARTONI (SpA), inkokheli yaseRoma-kwinkqubo yeenkxaso zekhamera zezakhono. Inkampani yasungulwa kwi-1935 kwaye ukususela ngo-1990, phantsi kwesikhokelo sika-Elisabetta, inkampani iyaqhubeka ikhula ngekcubeko loyilo olutsha. Okwangoku iphethe ngaphezulu kweelungelo le-35 lobugcisa bekhamera kwaye lijongwa nedumela elizwe ngamazwe ngokuthembeka, ukusebenza kunye nobunjineli obugqwesileyo.
Previous: Igosa lePolisa (emva kwesikhathi / i-Academy Graduate ...
next: Bluefish444 Yongeza i-SMPTE 2022 IP Capture ku-Avid Media Composer®
Hey Buddy !, Ndiyifumene le ngcaciso kuwe: "Ukukhangela ibhola eligqibeleleyo? Liqala ngeNkxaso.". Nantsi ikhonkco lewebhu: http://www.broadcastbeat.com/looking-for-the--hot-it-starts-with-support/. Enkosi.